ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များ - အများဆုံးအသုံးပြုသော (2020) - Gadgets
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များ - အများဆုံးအသုံးပြုသော (2020)
တက်ဘလက်များသည်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်း၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်နေရာတိုင်းနှင့်အချိန်မရွေးမိမိကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ တီဗွီတွေနဲ့မတူတာကမင်းတို့မှာသူတို့ကိုရွေ့လျားနိုင်သလိုသင်နဲ့အတူသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ စမတ်ဖုန်းများသည်ခေါ်ဆိုမှု၊ စာပို့ခြင်းနှင့် app အသိပေးချက်များအားလုံးနှင့်ပြတ်တောက်နိုင်သည်။ သင်တက်ဘလက်နှင့်အတူမရကြဘူး။
ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်တက်ဘလက်များအတွက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်ရှာနေပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များ? သင်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်အားဘတ်ဂျက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုများမှအဆင့်မြင့်ပါဝါဖျော်ဖြေသူများအထိမတူညီသောတက်ဘလက်များပါသည့်စာရင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ထံယူဆောင်လာသည်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်အတူတကွထုပ်ပိုးထားသောလူသိနည်းသောအမည်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အချို့ရှိသည်။ စေ့စေ့စပ်စပ်သုတေသနနှင့် In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်ကျနော်တို့ဒီစာရင်းပြုစုကြပါပြီ။ သင့်အားကောင်းမွန်စွာရွေးချယ်နိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံသတ်မှတ်ချက်များစာရင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်ရွေးချယ်မှုအတွက်စွယ်စုံအကွာအဝေးကိုရ။ သွားပြန်ပြီ!
အခမဲ့ရုပ်ရှင် streaming များဆိုဒ်များ (2020)
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များ - သုံးသပ်ချက်များ
၁။ Apple iPad ၁၀.၂
သိုလှောင်နေရာ:32/128 GB ကို
Apple က၎င်း၏တောက်ပသော iPad 10.2 နှင့်အတူဖန်ခွက်ထိပ်တွင်ရှိနေသည်။ ၎င်းသည် WiFi သို့မဟုတ် WiFi & Cellular တို့အကြားဆက်သွယ်မှုအတွက်ရွေးချယ်မှုပါဝင်သည်။ A10 Fusion ချစ်ပ်သည်ထူးခြားသောအမြန်နှုန်းနှင့်မရပ်မနားဖျော်ဖြေမှုအတွက် ၁၀ နာရီဘတ်ထရီသက်တမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Full-HD recording နှင့် ၈ MP MP နောက်ဘက်ကင်မရာနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် 1.2 MB ရှေ့ကင်မရာရှိသည်။ HDR ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသော 1080P ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ စတီရီယိုစပီကာရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
၎င်းသည်မြန်နှုန်းမြင့် BlueTooth ဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့်အခြားကိရိယာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ထပ်မံလုံခြုံမှုရှိရန်သင့်တွင်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာရှိသည်။ အနုပညာအနည်းငယ်ကိုသင်နှစ်သက်ပါက၎င်းသည်ပန်းသီးခဲတံနှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ရုပ်ရှင်များအတွက်သာမက၊ အခြားဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်လည်းကောင်းမွန်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, လျှပ်စီး connector က၎င်း၏တောက်ပမော်ဒယ်မှထပ်ပြောသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်သင်သည်အက်ပဲလ်၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးရုပ်ရှင်များကိုဗီဒီယိုများရိုက်ကူးခြင်းသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ 32 သို့မဟုတ် 128 GB သိုလှောင်မှုပမာဏသည်ရုပ်ရှင်တက်ဘလက်အတွက်သင်၏စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
လျှပ်စီး connector နှင့်အတူကျယ်ပြန့်ဘက်ထရီသက်တမ်း
HD မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် 128GB သိုလှောင်မှု
အခြားကိရိယာများအတွက် Bluetooth အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
128 GB model သည်အတော်လေးစျေးကြီးသည်
၂။ Dragon Touch K10 Tablet
ပြသမှုHD IPS (1280 x 800)
သိုလှောင်နေရာ:16 GB (ချဲ့နိုင်သည့် 128 GB)
ဤတွင်သင့်တွင် ၁၀ လက်မအကျယ် ၁၀ လက်မရှိသော HD IPS မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအလင်းရောင်၏မြင်သာမှုကိုသက်ရောက်မှုမရှိသောစာရင်းတွင် Dragon Touch ပါဝင်သည်။ ယင်း၏အထင်ရှားဆုံးလက္ခဏာမှာသင်၏ရုပ်ရှင်များကို TV သို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန် mini HDMI အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ 16 GB သိုလှောင်မှုကိုပေးသော်လည်း 128 GB သည်ချောမွေ့စွာချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
HDMI အပြင်သင်သည် USB port, BlueTooth နှင့် WiFi ကဲ့သို့သောဆက်သွယ်မှုကျယ်ပြန့်စွာကိုသင်ရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်ကိုအလျင်အမြန်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အဆုံးမဲ့ရုပ်ရှင်ကားများကိုနှစ်သက်ခြင်းတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသော 'ဖျော်ဖြေရေးစခန်း' ဖြစ်နိုင်သည်။2GB RAM ပါ ၀ င်သည့် quad-core ပရိုဆက်ဆာသည်တက်ဘလက်ကိုအလွန်အကျိုးရှိစေသည်။ သင်၏မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်။
K-10 သည် touch screen အတွက် ၁၇၈ ဒီဂရီဗီဒီယိုထောင့်များ၊ အရောင်တောက်ပခြင်း၊ သို့သော်တက်ဘလက်သည်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည် ၅ နာရီဗီဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဂီတထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ၇ နာရီပေးထားသည်။ ၎င်းသည်စာရင်းတွင်သိသိသာသာနိမ့်သည်။
ကောင်းမွန်သောအသံအရည်အသွေးအတွက်သင့်တွင်စပီကာနှစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်း၏ Android လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြင့်သင်သည် Google Play သို့ ဆက်သွယ်၍ သင်၏ဖျော်ဖြေရေး application အားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ဘတ်ဂျက်မလိုသောတက်ဘလက်ကိုရှာဖွေနေသောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
TV နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် mini-HDMI port
HD display ဖြင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
၃။ HD HD 10 Tablet
သိုလှောင်နေရာ:32/64 GB (ကျယ်ပြန့်သော 512 GB)
အမေဇုံကစျေးနှုန်းချိုသာတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့အရည်အသွေးမြင့်တက်ဘလက်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်အတော်လေးအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် HD ရုပ်ရှင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအကောင်းဆုံး 1080P HD မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သော Fire HD 10 Tablet ရှိသည်။ သင်သည်ဗီဒီယိုများစီးဆင်းလျှင် ၁၂ နာရီ၊ ၁၀ နာရီထူးခြားသောဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည်။
ထို့အပြင် 3212 နှင့် 64 GB သိုလှောင်မှုအကြား 512 GB အထိချဲ့ထွင်နိုင်သည့် option ကိုသင်ရရှိသည်။ Ergo, ကကြာရှည်ခံမယ့်တက်ဘလက်တစ်ခုပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သင့်တွင် ၂.၀ Gigahertz Octa-core ပရိုဆက်ဆာနှင့်2GB RAM ရှိပြီး၊ အင်တာနက်ဖွင့ ်၍ မီဒီယာကိုဖွင့်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်က Tablet မှာ Alexa-enabled ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်အသံလက်ထောက်တစ် ဦး ၏မှီခိုမှုကိုရရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် Prime Videos, Kindle, Amazon Music နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့အမေဇုံအထူးသီးသန့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုရယူနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကလေးများအတွက်အဆင်ပြေသောရွေးချယ်မှုအတွက်၎င်းတွင်ကလေးများရှိသည်။
ထို့ကြောင့်သင်၌ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ပြပွဲများကိုကြည့်လိုသောကလေးများရှိပါက၎င်းတို့သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲအဆင်ပြေစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာ ၂ MP၊ audio jack နှင့်ဆက်သွယ်မှု၊ USB Type-C, BlueTooth နှင့် WiFi ရွေးစရာများပါ ၀ င်သည်။
Alexa voice assistant နှင့် Amazon platform support
ကြည်လင်ပြတ်သားသောဗီဒီယိုအရည်အသွေး 1080P (224 PPI)
လုံးဝအားသွင်းရန်4နာရီဝန်းကျင်ကြာပါသည်
ပြသမှုစူပါ AMOLED (2560 x 1600)
သိုလှောင်နေရာ:64/256 GB (၄၀၀ GB ချဲ့နိုင်သော)
Samsung သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစာရင်းတွင်ရှိသည့်အခြားတက်ဘလက်များထက်သာလွန်သည်။ ၁၀၆.၅ လက်မ Super AMOLED မျက်နှာပြင်ကိုသင်ရရှိထားပြီး Ultra HD ရုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံကိုရရှိရန် 2560 x 1600 Pixels ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထူးခြားသောဖျော်ဖြေမှုအတွက်စာရင်းရှိအခြားတက်ဘလက်များထက်သာလွန်သည့် Dolby Atmos အထောက်အပံ့ဖြင့် Quad စပီကာများကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ 64 နှင့် 256 GB သိုလှောင်မှုနေရာအကြားမဖြစ်နိုင်သည့်ဖျော်ဖြေမှုအတွက် ၁၆ နာရီစွမ်းအားပြည့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုရနိုင်သည်။ သိုလှောင်မှုကို 400 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။ ဒါကကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တက်ဘလက်တစ်ခုပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်4GB RAM နှင့် Qualcomm Snapdragon 8-core ပရိုဆက်ဆာ (2.35 GHz) နှင့် Android 8.0 Oreo ရှိသည်။
Touch Pen ကိုသီးခြားဝယ်ယူရန်လိုသည့် Apple နှင့်မတူပါကသင်တီထွင်နိုင်သည့်အပန်းဖြေမှုအတွက်သင်၏တက်ဘလက်နှင့် S pen ကိုရရှိသည်။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်မျက်နှာခြင်းချိန်ခြင်းအတွက်သင့်တွင် 13 MB နောက်ကင်မရာနှင့်ထူးခြားသော 8 MP ရှေ့ကင်မရာရှိသည်။ နှစ်ခုလုံးကို HD recording ဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ သင်သည် 8x Digital zoom ရရှိသည်။
လွယ်ကူသောသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ပေါ့ပါးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် BlueTooth နှင့် WiFi ဆက်သွယ်မှုများရှိသည်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်အကုန်အကျများနိုင်သော်လည်း၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ဘတ်ဂျက်ရှိပြီးပရီမီယံအဆင့်ရုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံကိုရှာဖွေလိုပါက၎င်းသည်တက်ဘလက်ထက် ပို၍ ကောင်းမွန်မည်မဟုတ်ပါ။
400 GB အထိချဲ့နိုင်သောကျယ်ပြန့်သောသိုလှောင်မှု
ရုပ်ရှင်စီးဆင်းမှုအတွက် Ultra HD အထောက်အပံ့
သိုလှောင်နေရာ:32 GB (ချဲ့နိုင်သည့် 128 GB)
သင်ကမျှတတဲ့တက်ဘလက်တစ်ခုကိုရှာနေတယ်ဆိုရင် Fusion5 ဟာရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အား streaming movies များအတွက် 'trades of jack' ကိုသယ်ဆောင်ရန်အင်္ဂါရပ်များ၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။
အရည်အသွေးမြင့် streaming အတွက် ၁၀.၁ လက်မ HD IPS display ရှိသည်။ စပီကာနှစ်ခုကကောင်းမွန်သောဟန်ချက်ညီသောအသံအရည်အသွေးကိုပေးစွမ်းသည်။ သိုလှောင်မှုမှာပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃၂ GB ရှိပြီး 128 GB အထိချဲ့နိုင်သည်။ သူ့မှာ 1 GB RAM ရှိပြီး6နာရီဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်တက်ဘလက်များကိုရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုလိုသူများအတွက်အသက်သာဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် '' အလုပ်ပြီးပြီ။ '' ဤသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားလောက်သောအရာမရှိပါ။ သင်၏ TV set နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် BlueTooth, WiFi နှင့် HDMI port များကဲ့သို့သောဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တက်ဘလက်လောကနှင့်အသစ်တစ်ခုကို၎င်း၊ သတ်မှတ်ထားသောဘတ်ဂျက်ဖြင့်လေ့လာလိုလျှင်၎င်းသည်စတင်ရန်ပညာရှိရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အင်္ဂါရပ်များအပြည့်အဝတစ် ဦး jack ကို -of All- ကုန်သွယ်ရေး
HD Movies အတွက်ကောင်းပါတယ်
ပျမ်းမျှတက်ဘလက်ဘယ်နေရာမှာမဆို excel မထားဘူး
ပြသမှုIPS (1280 x 800)
ယခုဤနေရာသည်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရန်အပြေးပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့သည်။ HAOQIN တွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ၆၀၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့် 1280 x 800 IPS မျက်နှာပြင်၏ ၁၀.၁ လက်မဘက်ထရီတို့ပါ ၀ င်သည်။ သိုလှောင်မှု 32 GB ရှိပြီး 128 GB အထိချဲ့နိုင်သည်။
စပီကာနှစ်ချပ်သည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအသံအရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်၊ သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်အနည်းဆုံး Android 9.0 pie ၁.၅ GHz ပရိုဆက်ဆာနှင့်2GB RAM ရရှိသည်။ သင်2နှင့်5MP ကင်မရာရတယ်။
ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကနေအထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်ကသူ့ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းပါ။ အခြားအရောင်စဉ်များအရ၎င်းသည်ဟန်ချက်ညီစွာရှိပြီးပျမ်းမျှအားဖြင့်ပျမ်းမျှဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် HD IPS display မဟုတ်ဘဲ IPS display ရှိသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် HD ရုပ်ရှင်များကိုဖွင့်ပြီးပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်ရှာဖွေနေသော True-HD ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်သင်တတ်နိုင်သောတက်ဘလက်နှင့်စွမ်းအင်ပြည့်သောဘက်ထရီသက်တမ်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်သင့်တော်ပေမည်။ ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအခြား androids စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်စေသည်။
ထူးခြားသော ၆၀၀၀ mAh ဘက်ထရီသည် ၁၀-၁၄ နာရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကတိပေးသည်
အားလုံးဆက်သွယ်မှု options များရရှိနိုင်ပါ
လွယ်ကူသော interface နှင့် setup ကို
HD Display မရှိပါ
7. WINNOVO TS10 Tablet 10 လက်မ
သိုလှောင်နေရာ:၃၂ GB (၆၄ GB ချဲ့နိုင်သော)
စပီ:Dual Stereo Speaker
သင်နောက်ဆုံးပေါ် Android နှင့်အတူတက်ဘလက်ရှာနေပါသလား? ထိုအခါ WINNOVO သည်သင်ရှာနေသည့်ကိရိယာဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မိသားစုဆက်သွယ်မှု၊ မှောင်မိုက်သောအခင်းအကျင်း၊ focus mode၊ အပြာအလင်း filter နှင့်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပေါင်းစပ်မှုများစသည့်နောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူပါရှိသည်။
သင်သည် ၁.၃ GHz အမြန်နှုန်း quad-core ပရိုဆက်ဆာကိုရရှိနိုင်ပြီး RAM2GB ပါ ၀ င်ပြီးကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံရရှိရန်စားပွဲ၌အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ စတီရီယိုစပီကာများပါရှိသည်။ သို့သော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းအတွေ့အကြုံကောင်းအတွက်အသံအရည်အသွေးကိုသင်နှစ်ခုရနိုင်သည်။
နောက်ထပ်ဘာလဲ? ၎င်းသည် ၁၀.၁ လက်မ HD IPS မျက်နှာပြင်၊ နောက်ဘက်တွင် 8 MP နှင့် HD (720P) တွင်လှပစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောရှေ့ကင်မရာ5MP ပါဝင်သည်။ ခရီးသွားရလွယ်ကူစေရန်သင်သည် GPS စနစ်ပါ ၀ င်သည့်စနစ်ကိုရရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒါဟာဖျော်ဖြေရေးယူနစ်တစ်ခုတည်းသာမကဘဲလမ်းတွေပေါ်မှာမင်းရဲ့လမ်းညွှန်ပါ။
64 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည့် memory ကိုကန့်သတ်ချက်ဖြင့်အနည်းငယ်လျှော့ချနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လုံလောက်သောစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ အားသာချက် ၆၀၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုအကန့်အသတ်မရှိစွမ်းအားပေးနိုင်ပြီးသင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Android နှင့် Bluelight ကဲ့သို့သောမိသားစုဝင်များ၊
၆၀၀၀ mAh အားကောင်းသောဘက်ထရီ
HD မျက်နှာပြင်, HD မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
စွမ်းအား - ထုပ်ပိုးစွမ်းဆောင်ရည်
Navigation System တစ်ခုပါရှိပါတယ်
မျက်နှာပြင်သည်အခြား tablet များထက်အနည်းငယ်မှောင်မိုက်သည်
၈။ Samsung Galaxy Tab A 10.1
ပြသမှုFull HD ထောင့်မှထောင့်သို့
စပီ:Dual Stereo Speaker (Dolby နှင့်အတူ)
Samsung ကအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲ၌ Ace နှင့်အတူစာရင်းတွင်ပြန်လည်ပါ ၀ င်နေသည်။ ဒီနေရာမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်တစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ ၁၀.၁ လက်မ၊ HD အပြည့်ထောက်ပံ့မှုနှင့် Dolby Atmos အသံစွမ်းရည်တို့ဖြင့်ထောင့်မှထောင့်အကျယ်ပြန့်ကျဲမှုရှိပြီး Galaxy Tab A သည်စာရင်း၏အခြားတက်ဘလက်များထက်လိဂ်များဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးအဖြစ်ဝေးစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကိုသက်ဆိုင်သည်။
သင်သည်သတ္တုကိုယ်ထည်ကိုကြာရှည်ခံရန်အတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေသည်။ စစ်မှန်သောရုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံအတွက်ဤရွေးချယ်မှုသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည် ၆၁၀၀ mAh ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကြာရှည်ခံစေပြီး ၁၂ နာရီမှ ၁၅ နာရီအထိကြာရှည်ခံသည်။
၎င်းတွင်စံ5MP ရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာ 8 MP ရှိသော်လည်း HD Recording ပါဝင်သည်။ သတ္တုကိုယ်ထည်ရှိသော်လည်းသင်၌ပေါ့ပါးသော (၁ ပေါင်) ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသင်၏သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် 32, 64 နှင့် 128 GB အကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပိုပါတယ်! သင်၏အဆုံးမဲ့သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် 512 GB လောက်ကောင်းမွန်သောဤမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။ ဒီတစ်ခုကစာရင်းထဲမှာပါတဲ့အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်တစ်ခုပါ။ သို့သော်ဤအပန်းဖြေမှုအားလုံးကိုရယူရန်အတွက်၎င်းသည်စာရင်းရှိအခြားသူများထက်နောက်ဆုံးပေါ် Android နှင့်ပိုမိုဈေးကြီးသည်။
ထောင့်ထောင့် ၁၀'၁ လက်မ Full-HD မျက်နှာပြင်
Memory ကို 512 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်
Dolby Atmos အသံထောက်ခံမှု
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တည်းအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်
သင်ပိုကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကူညီဖို့, သင့်ကိုအသေးစိတ်ဝယ်သူလမ်းညွှန်ပေးနေပါတယ်။ ဤလမ်းညွှန်၏အကူအညီဖြင့်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကိုတိတိကျကျသိလိမ့်မည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို ၀ ယ်ယူရန်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ရွေးချယ်မှုအတွက်သင်နောင်တမရကြောင်းသေချာစေလိုသည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရန်အချက်အလက်များအပြည့်အစုံကိုမင်းထံပို့ပေးပါမည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ကရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့တက်ဘလက်ကိုရှာနေတာဆိုတော့ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိသင့်တယ်။ အကယ်၍ ၎င်းတွင်အနည်းဆုံး ၁၀ လက်မမျက်နှာပြင်မပါရှိလျှင်၎င်းသည်ထိုက်တန်သလော။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထက်သေးငယ်ပြီးစမတ်ဖုန်းကိုစဉ်းစားသင့်တာပေါ့။ ထို့ကြောင့် ၁၀ လက်မမျက်နှာပြင်သည်အနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။
Display ရဲ့အရည်အသွေးကအရေးကြီးတယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် pixels ကိုမပါဘဲများစွာသော LEDs သို့မဟုတ် LCDs ရှိပါတယ်။ သင်က high-definition ရုပ်ရှင်တွေကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် display ရဲ့ pixel range ကိုစစ်ဆေးရပါမယ်။ standard HD, 1080P, Ultra HD 4K နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သို့သော် HD IPS သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
အခုတော့အရည်အသွေးအထောက်အပံ့နှင့်အရွယ်အစားအပြင်မျက်နှာပြင်၏တောက်ပမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အလင်းအလွန်အကျွံတွင်ယိမ်းယိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မှေးမှိန်ခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါ။ အပိုချိန်ညှိနိုင်သည့်တောက်ပမှုရွေးချယ်မှုသည်ကောင်းသော်လည်းအချို့ကိစ္စများတွင်နေရောင်ခြည်တွင်အမြင့်ဆုံးတောက်ပမှုပင်မလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်တွင်ပြောင်လက်တောက်ပမှုရှိသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
တောက်ပနေသောအရာသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်၊ ထို့အပြင် display ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့သောတက်ဘလက်များသည်ဤပြproblemနာကိုလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်။ သငျသညျအကာအကွယ်မျက်နှာပြင်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းသောထို့အပြင်စေနိုင်သည်လျှင်သို့သော်, ထိုအဖြစ်ကောင်းစွာအဆင်ပြေပါတယ်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာအချို့သော LED သို့မဟုတ် LCD display များသည်မြင်သာမှုပြaနာရှိသည်။
တစ် ဦး အထူးသဖြင့်ထောင့်ကနေ, ကဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရှုရန်ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အရောင်များမရှိခြင်း၊ အချို့ကိစ္စများတွင်ပြောင်းပြန်လှန်အရောင်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့်မိသားစုနှင့်အတူပျော်မွေ့လိုပါကသင့်တွင်ကွဲပြားသောထောင့်မှမြင်နိုင်သောမျက်နှာပြင်ရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ထုတ်လုပ်သူများစွာသည်အသံအရည်အသွေးကိုပျက်စီးစေသည်။ Apple သို့မဟုတ် Samsung ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ထူးခြားသောအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ၊ Bluetooth နားကြပ်သို့မဟုတ်စပီကာများကိုသင်မသုံးလိုလျှင် built-in စပီကာများသည်ကျယ်လောင်သင့်သည်။
ကို 'built-in' 'စပီကာဆင်ခြေသင့်ကိုအရူးမခံပါနဲ့။ ခေတ်သစ်နည်းပညာသည်ထုတ်လုပ်သူများအား HD input အထိထိရောက်သောအသံအရည်အသွေးကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ equalizer သို့မဟုတ်အသံပရိုဖိုင်းကိုထောက်ခံမှုရှိသင့်သည်။ မရရှိလျှင်, Dolby အသံထောက်ခံမှုချီးကျူးလိမ့်မယ်။
တက်ဘလက်မှာဆယ်လူလာဆက်သွယ်မှုမပါရင်တောင် WiFi ဆက်သွယ်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သို့သော် HDMI port တစ်ခုရှိပါကသင်တက်ဘလက်ကို TV နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်ပိုမိုထင်ရှားသော display ကိုလိုချင်လျှင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုအတွက်စပီကာများကဲ့သို့သောအခြားကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် BlueTooth သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တနည်းအားဖြင့်အသံ jack ကအခန်းကဏ္fulfillကိုလုံလောက်စွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် WiFi မှအပချိတ်ဆက်မှုသည်အရေးမကြီးပါ၊ သို့သော်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်အရမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အနည်းဆုံး 1 GB RAM လိုအပ်လိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးအနည်းဆုံး 1 GB RAM လိုအပ်သည်။ တက်ဘလက်သည် HD streaming ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ Netflix, Prime Videos, Disney + Hotstar ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများစွာသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကိရိယာများမလိုအပ်ပါ။
မည်သူမျှ HD ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲများထက်နည်းနည်းမျှမလိုချင်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နာရီကြာသောဗီဒီယိုပင်လျှင် 1 GB မှ2GB ရှိလိမ့်မည်။ ပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကားသည် ၂ နာရီခန့်ဖြစ်သဖြင့်အနည်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုလျှင် 3-4 GB သိုလှောင်ရန်လိုသည်။ ယခုတွက်ချက်မှုအရသိုလှောင်မှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသင်နားလည်လာပြီဖြစ်သည်။
ဖျော်ဖြေရေးအတွက်တက်ဘလက်တစ်ခုရှိဖို့အနည်းဆုံးသိုလှောင်မှု 32 GB လိုအပ်သည်။ အပိုနေရာယူမည့်အရေးပါသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုသင်တပ်ဆင်မည်။ ဒီနေ့၏မြန်ဆန်သောဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာတွင်အနည်းဆုံးသိုလှောင်မှုအနည်းဆုံး ၆၄ GB မလိုပါကသင်၏တက်ဘလက်သည်အသုံးမကျပေ။
နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့၊ သင်ရဲ့တက်ဘလက်မှာ 16 GB ရှိသလား၊ ချဲ့လို့ရတဲ့မှတ်ဉာဏ်ရှိသလားဆိုတာကအရေးမကြီးဘူး။ အကယ်၍ ၎င်းတွင်အနည်းဆုံး 64 GB မှ 128GB တိုးချဲ့နိုင်သောမှတ်ဉာဏ်ရှိပါကထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်တက်ဘလက်၏သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့ရန်နောက်ပိုင်းတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ Cloud သိုလှောင်မှုသည်လည်းလူတို့၏စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သိုလှောင်ရန်အတွက်သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အက်ပ်မှဒေါင်းလုတ်လုပ်စရာမလိုဘဲတိုက်ရိုက်စီးဆင်းလိုပါကသိုလှောင်မှုသိပ်မလိုအပ်ပါ။ သို့တိုင်၊ 64GB GB သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော app များအတွက်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်တက်ဘလက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းကူညီလိမ့်မည်။
interface အတွက် operating system -
User-interface နှင့်တက်ဘလက်များတွင်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုတို့သည်အဓိကဖြစ်သည်။ သငျသညျထိန်းချုပ်မှုများနှင့် command များကဲ့သို့အပိုဆောင်း features တွေရှာနိုင်သည်။ ၎င်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ operating system ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောလည်ပတ်မှုစနစ်သည်အထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုထပ်မံပေးစွမ်းလိမ့်မည်။
Apple, iOS, Windows တို့မှနောက်ဆုံးပေါ် operating system ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကပိုကောင်းပါတယ်။ တက်ဘလက်အဟောင်းဗားရှင်းနှင့်အတူပါလာလျှင်, ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဗားရှင်းမှအဆင့်မြှင့်ကိုထောကျပံ့သငျ့သညျ။ သင့်တွင်မကြာသေးမီကလည်ပတ်နေသောစနစ်များမရှိပါကအချို့အက်ပ်များသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
iOS မှာချောမွေ့တဲ့ interface ရှိတယ်။ Android မှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိတယ်။ ဝင်းဒိုးကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုဖို့ပိုကောင်းတယ်။ သင်၏လိုအပ်ချက်အရ OS ပါသည့်တက်ဘလက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
တက်ဘလက်များ၏အကျိုးကျေးဇူးကတော့၎င်းတို့သည်အလွန်အမင်းသယ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တက်ဘလက်တစ်လုံးသည်ပေါ့ပါးသော်လည်းကြီးမားပြီးကြီးမားသောအရွယ်အစားရှိသင့်သည်။ သင့်မှာစွယ်စုံသုံးတက်ဘလက်တစ်ခုရှိရင်နေရာတိုင်းမှာလက်တော့ပ်မလိုအပ်ပါဘူး။
သိသာထင်ရှားတဲ့ကသင်၏ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်၏ tablet ကိုနေရာတိုင်းသယ်ဆောင်။ 'ကြံ့ခိုင်သော' တီဗီနှင့်အစားထိုးလိုပါကသင်တက်ဘလက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ နောက်တနည်းအားဖြင့်သင်သွားလေရာနေရာကိုသယ်ဆောင်သွားပါက၎င်းသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းသည်တာရှည်ခံကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
အဆုံးမဲ့ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်အဓိကကျသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲသည်မိနစ် ၂၀ မှ ၄၀ အထိဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်သည်အနည်းဆုံးမိနစ် ၉၀ ကြာနိုင်သည်။ တက်ဘလက်အတွက်အခြားလိုအပ်ချက်များလည်းရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ရေရှည်ခံနိုင်သောတက်ဘလက်တစ်ခုအတွက်အနည်းဆုံး ၅ နာရီဘတ်ထရီသက်တမ်းလိုအပ်သည်။ သင် ၅ နာရီအကြာတွင်အားသွင်းရန်လိုလျင်မြန်နှုန်းမြင့် charger ရှိပါကအဆင်ပြေပါသည်။ သင်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်အချိန်တွင်တက်ဘလက်တစ်ခုကိုလည်ပတ်ရန်အတွက် plug and play option သည်အဆင်ပြေသော option တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည်မပျက်ဆီးနိုင်သောဖျော်ဖြေမှုကိုအမှန်တကယ်ရှာဖွေလျှင်၊ အထူးသဖြင့်သင်မကြာခဏခရီးသွားလျှင်၊ ၁၀ နာရီခန့်ကြာသောဘက်ထရီသက်တမ်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဘက်ထရီရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားအဖြစ်ကတက်ဘလက်ရဲ့အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ။
Fire for Fire Tablet ကဲ့သို့သော AI လက်ထောက်ကအဖိုးတန်ဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်
အပြာအလင်း filter သည်အထူးသဖြင့်ညဘက်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ရှာဖွေရန်အလွန်ကောင်းသည့်အင်္ဂါရပ်ဖြစ်နိုင်သည်
1Q ။ တက်ဘလက်တစ်လုံးတွင် RAM မည်မျှရှိသင့်သနည်း။
နှစ်များသင်နိမ့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှာနေလျှင်တက်ဘလက်အနည်းဆုံး 1 GB RAM ရှိသင့်သည်။ browsing နှင့် streaming အများစုသည်အနည်းဆုံး 1GB မှ 2GB ram လိုအပ်သည်။ သင်တက်ဘလက်အတွက်4GB RAM ရရင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကိရိယာတစ်ခုပါ။
2Q ။ စမတ်ဖုန်းအစားဘာကြောင့်တက်ဘလက်ကိုဝယ်သင့်တာလဲ။
နှစ်များအထူးသဖြင့်ရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုရန်အတွက်တက်ဘလက်ကို ၀ ယ်ရန်အဓိကအကြောင်းအရင်းနှစ်ခုမှာ ပို၍ ထင်ရှားသော display နှင့် aspect ratio ratio ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းများတွင်ပင် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ Samsung ၏ခေါက်နိုင်သောဖုန်းသည် ၇.၃ လက်မမျက်နှာပြင်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တက်ဘလက်တွေနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး ၁၀ လက်မမျက်နှာပြင်ကိုရနိုင်မှာပါ။
မျှတသောဗေဒနှင့်စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံများအတွက်အချိုးသည်သင့်လျော်သောအချိုးအစားနှင့်ဗွီဒီယိုခွဲခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်။ 6+ လက်မဖန်သားပြင်များပါသောဖုန်းများသည်အကျယ်နည်းပါးသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံအတွက်မသင့်တော်စေပါ။
3Q ။ တီဗီထက် tablet ကပိုကောင်းသလား။
နှစ်များအဲဒီမှာတီဗီတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးအကုန်အကျများတယ်။ တက်ဘလက်တစ်လုံးသည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးသင့်တော်သောမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားရှိသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဆင်းလာပါတယ်။ သင့်မှာ Smart TV Set အတွက်ပိုက်ဆံရှိမယ်ဆိုရင်သင်တက်ဘလက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခု၊ အထူးသဖြင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါက၊
4Q ။ BlueTooth Speaker များကိုတက်ဘလက်များနှင့်ဘယ်လိုဆက်သွယ်နိုင်မလဲ။
နှစ်များ၎င်းသည်သင်၏တက်ဘလက်၏ပုံစံပေါ်မူတည်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်တက်ဘလက်များတွင် BlueTooth နှင့်အတူအခြားကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤရွေးချယ်စရာမရှိသောအချို့ရှိနေသေးသည်။ စပီကာများအသုံးပြုလိုပါကသင်၏တက်ဘလက်တွင် BlueTooth အထောက်အပံ့ရှိမရှိသေချာစေရန်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။
5Q ။ တက်ဘလက်များတွင် HDMI Output သည်တန်သင့်သလား။
နှစ်များသင့်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုသောစမတ်တီဗီမဟုတ်သည့်တီဗီစက်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ပါက HDMI output ပါသည့်တက်ဘလက်သည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ချိတ်ဆက်မှုကသင့်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စမတ်စက်ရှိရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏ TV တွင် streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံစားရန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းသည်ဖော်ပြရကျိုးနပ်ပါသည်။
အွန်လိုင်းလွှင့်ထားသောရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲများသည်ကမ္ဘာကြီးအတွက်စံအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ လူတိုင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေရန်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့၏ Netflix, Prime သို့မဟုတ် HD ရုပ်ရှင်များတွင်ပျော်မွေ့ရန်နည်းလမ်းကောင်းများကိုလိုချင်ကြသည်။ ဒါတွေဟာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များသည်ထိုရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောဘတ်ဂျက်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သည်။
ဤရွေ့ကားသူတို့ကိုဝယ်ယူရန်ခက်ခဲအောင်ထိပ်ကျော်မရှိကြပေ။ ဒီတက်ဘလက်တစ်လုံးချင်းစီဟာဈေးနှုန်းချိုသာပြီးအလွန်ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဤစာရင်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
အချိန်မရွေးအချိန်မရွေး Activate လုပ်နည်း
မည်သည့်ကိရိယာပေါ်တွင် Hulu ကို Activate လုပ်မလဲ။
Roblox ကဲ့သို့အကောင်းဆုံးဂိမ်း ၁၅ မျိုး (၂၀၂၀)
app မပါဘဲ kik သို့ ၀ င်ပါ
nvidia shield နှင့်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာများ
youtube video များကို mp3 သို့ပြောင်းရန် android app